छत तनाव प्रकार स्थापना अनुभवी पेशेवर लागि एक सरल प्रक्रिया हो। यो हरेक nuance खातामा स्थापना को समयमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। डिजाइन कसरी लामो, काममा प्रयोग सामाग्री गुणस्तर, र यसको कार्यान्वयन गुणस्तर निर्भर लागि हुनेछ। कोठा मा छत स्तर स्थापना पछि धेरै कम हुनेछ भनेर मनमा राख्नुहोस्। तनाव छत संग कति थोपा छत पत्ता लगाउन क्रममा, संचार र दृश्यहरू जुडनार को आकार निर्धारण गर्नुपर्छ। संरचना दुई स्तर छ भने, छत उचाइ 10 सेन्टिमिटर द्वारा कम छ।
सतह माउन्ट छत गर्न तल्ला स्लैब देखि दूरी सिधै जस्तै धेरै पक्षहरू असर गर्नेछ:
भौतिक प्रकार प्रयोग।
विधि baguettes गर्न ब्लेड Mounts।
प्रकाश तत्व को यौगिकों को विविधता।
भविष्यमा निर्माण अन्तर्गत लुकेको गरिने संचार को संख्या।
पनि यो कोठा र उचाइ को आकार मा निर्भर गर्दछ।
उचाइ स्तर lowering कारणहरू
यो तीन कारण छन् कि जो मा यो निलम्बित छत छत अन्तर्गत पतन कति निर्भर जानिन्छ स्थापना को समयमा। तिनीहरूलाई प्रत्येक हाइट्स आफ्नो स्तर असर:
प्रायजसो, voids पर्खालहरु र छत slabs को जोइन्टहरूमा गठन गर्दै हुनुहुन्छ। यी क्षेत्रमा अक्सर समतल सतह छैन किनभने यो छ। यो फ्रेम voids समाधान गर्न असम्भव भएकोले, जो मार्फत सामाग्री stringing आयोजित। तपाईं अझै पनि यो पकड भने, baguettes अविश्वसनीय छन्। यस कारण, पर्खालहरु मा शून्य को अन्त सम्म बिन्दु तल क्यानभासमा।
कुनै पनि प्रकारको प्रकाश फिक्स्चर स्थापना छानो तल्लो स्तर आवश्यक छ। प्रकाश प्रणाली फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ, तर यो सम्पूर्ण संरचना आफ्नो आकार मा कम हुनेछ कति निर्भर गर्दछ। माथिल्लो भाग, जो मा बांधनेवाला तनाव सामाग्री अन्तर्गत लुकाइन् गर्नुपर्छ।
को प्लेट सतह असमान छ भने। यो समस्या भवन को दबाव देखि वा जो नवीकरण भइरहेको छ, अनुभव को निर्माता देखि उत्पन्न हुन सक्छ। यसलाई गठन सक्थे जो गरिएको दोष को कारण हटाउन महत्त्वपूर्ण छ। देखि, कति कोठा निर्भर हुनेछ को छत खण्डका छत उचाइ अन्तर्गत पर्न हुनेछ।
समस्या समाधान गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका छानो उचाइ परिवर्तन हो। भने, तर, यो बेवास्ता गर्ने, क्यानभासमा असमान र अविश्वसनीय स्थापना को समयमा हुनेछ।
के उचाइ तल डिजाइन मा
सबै भन्दा मालिकहरूको लागि एक साधारण समस्या छत एउटा सानो स्तर छ। त्यसैले, सबै जहाँसम्म छत स्थापना पछि खण्डका छत संग पतन रूपमा, फिक्री। शीर्ष प्लेट समतल छ र त्यहाँ संचार को एक ठूलो संख्या हो भने, ऊतक वेब मात्र3सेन्टिमिटर द्वारा तल छ। 2.5 सेन्टिमिटर द्वारा एक विशेष पीवीसी फिलिम को आधारको रूपमा प्रयोग, त्यसपछि। यदि अभ्यास विरलै आदर्श अवस्थामा, त्यसैले इन्डेन्टेसन स्तर 2.5 16 सेन्टिमिटर देखि भिन्न हुन सक्छ।
केही अवस्थामा, पर्खाल को एक पक्ष बाट माप संग छत सतह को अनियमितताहरु गर्न कारण गद्दी4सेमी र अन्य 10 देखाउँछ, त्यसैले यो मालिकको निर्णय आवश्यक छ। कहिलेकाहीं छत नजिकै पर्खालहरु तिनीहरूले अक्सर मलबे राख्नु, र त्यसपछि एक समाधान संग गंदा, माथि6सेमी को अंतराल छ। सम्पूर्ण संरचना दृढ आयोजित भएको छ, यो voids उपस्थिति पत्ता लगाउन आवश्यक छ। संलग्न यस स्थानमा स्थापित गरिएको छ भने, baguettes बस गायब।
प्रकाश तत्व को स्थापना
प्रकाश तत्व को स्थापना - निलम्बित छत को स्थापना मा एक महत्वपूर्ण भाग। तिनीहरूले पहिलो जडान गर्नुपर्छ। जो मा रोशनी सम्मेलन स्थापना गर्दा छत निलम्बित कति घटेको आधारमा चयन गरिएका छन्। एक कोठा मा प्रकाश विभिन्न प्रकारका को योजना दायरा भने, तपाईं नेत्रहीन कोठा उचाइ विभाजन गर्न सक्छौं। निर्माणाधीन स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर प्रजाति फिक्स्चर:
एलईडी दीपक प्रकार।
विकल्प निर्धारण गर्न, तपाईं प्रत्येक luminaire बारेमा एउटा विचार हुनुपर्छ। यो पहिले नै र स्तर को उचाइ निर्भर हुनेछ। यो छत फ्रेम टिकाउ सामाग्री को गर्नुपर्छ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ, यो सम्पूर्ण संरचना को विश्वसनीयता लागि आवश्यक छ। एक ठूलो हदसम्म यो ठूलो जुडनार चयन को मामला मा आवश्यक छ।
एलईडी पट्टी अक्सर प्रयोग गरिन्छ सतह परिष्करण मा। यसको प्रयोग सम्भव स्थापना batten को समयमा हुन सक्छ कि अनियमितताहरु सच्याउन बनाउँछ। तपाईं हटाइएका छ कति निर्णय गर्नुपर्छ पहिलो कुरा, यो निलम्बित छत हेर्न, र त्यसपछि स्थापना प्रक्रियामा संलग्न। अक्सर, उचाई को स्तर यस्तो रोशनी प्रयोग गर्दा 2.5 10 सेन्टिमिटर देखि दायरा।
कोठा मा स्टोभ उच्च छ भने, यो अधिकतम इन्डेन्टेसन 10 सेन्टिमिटर, कोठा कम हुनेछ डर बिना बनाउन सम्भव छ। यो मुद्दा stringing लागि सामाग्री को छनौट गर्न, छत उचाइ आधारित महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले शीर्ष प्लेट को स्तर मा निर्भर फरक। अरूलाई - सामाग्री को एक्लै प्रकार प्रयोग कम छत, र उच्च को मामला मा।
सम्मिलन बिन्दु प्रकाश प्रकार सजावट मा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले610 सेन्टिमिटर को छत स्तर कम गर्न आवश्यक छ। रूपमा प्रगति द्वारा निर्धारित, निलम्बित छत कम छ कति सेन्टिमिटर, तर स्वीकार्य सीमा भित्र। स्थापना प्वालहरू को समयमा4मिलिमिटरमा एक व्यास संग वेब मा कटौती गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो खोल्ने को किनाराको घन्टी प्लास्टिक बनेको चिपके छ। यो तपाईं क्यानभासमा stretching को समयमा हुन सक्छ जो दोष रोक्न अनुमति दिन्छ। यस प्रकारका दीपक दुई तरिकामा माउन्ट हुन सक्दैन।
स्थलहरू स्थापना को लागि विधिहरू
भिजुअल छाप वेब नै हल्का emits कि बनाएको छ किनभने यस्तो स्थापना विकल्प थप शानदार छ। यस मामला मा कुनै खन्नु प्वालहरू। तर, यो विकल्प बेफाइदा धेरै छ: हावा जुडनार कमी burnout को मामला मा, गरम करना, एक चिम परिवर्तन गर्न साथै उत्सर्जित प्रकाश को स्तर कम गाह्रो छ। तपाईं अझै पनि हाइलाइट गर्ने योजना भने यो विकल्प परिसर प्रकाश बल्ब बचत ऊर्जा किन्न गर्नुपर्छ। तिनीहरूले धेरै तातो प्राप्त छैन, र अब पछिल्लो गर्नुभयो।
चित्रहरू स्थापना को स्तर मा थप कायम गर्न व्यावहारिक र प्रयोग गर्न सुरक्षित छ।
चुनिएको छ झूमर को प्रकारको आधारमा, सम्पूर्ण कोठा मा रोशनी संग कति थोपा निलम्बित छत मा निर्णय। झाड धेरै पक्षबाट आएको:
सीधा छत गर्न माउन्ट जुन झाड।
हुक, तिनीहरूले प्लेट मा माउन्ट छन् हुक मा हङ छन्।
विकल्प र सामाग्री को प्रकार प्रकाश स्थापना baguettes पछि चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। स्थापना हुक वेबमा माथिल्लो आधार देखि3सेन्टिमिटर भन्दा इन्डेन्ट लगे। यसलाई केही समय पछि, त्यहाँ कपडा मा एक सानो सुस्त आउन सक्छ सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसैले राम्रो chandelier, जाने तल मार्जिन संग।
केही अवस्थामा, छत को स्थापना पछि, केही समय अवधि पछि, शिथिलता सक्छ। त्यसैले, तपाईं निलम्बित छत स्थापना समयमा कम छ कति अग्रिम विचार गर्नुपर्छ, यस धेरै महत्त्वपूर्ण छ। sagging लागि कारण यस्तो कारक रूपमा बनाउन सक्छ:
क्यानभासमा को गरिब गुणस्तर।
बेइमान कार्यकर्ता स्थापना।
उल्लंघन माउन्ट प्रविधि।
गलत तरिकाले पर्खालहरु मा moldings स्थापित।
तन्यता संरचना गुणस्तर कपडे प्रयोग गरेर सबै प्रविधिहरू मार्फत स्थापित भने, सुस्त नगण्य हुनेछ। यो कोठा को विकर्ण को लम्बाइ एक प्रतिशत बराबर एक प्रतिशत, नेत्रहीन imperceptible छ।
को नर्सरी मा मरम्मत: एक कल्पना संसार सिर्जना
को ताप सिस्टम कसरी चयन गर्न
कसरी सञ्झ्याल ढाक्नु गर्न
सुविधा र लाभ - लागि ईटा अगाडि प्यानल
MDF या particleboard - कसरी जो राम्रो छ निर्धारण?
अल्बर्ट एलिस गर्ने हो? प्रसिद्ध "अल्बर्ट एलिस विधिमा psycho"?
सिक्का सङ्कलन। विजयको 70 वर्षको सिक्काको एक सेट
अडिट व्यवस्था। यो के
Porphyry विधवा: यो अवधारणा मतलब कि?
घरमा सेल्युलाईट को प्रभावकारी मालिश
माछा व्हाइटफिश - व्यञ्जनहरु: सुखा, तला। नुन व्हाइटफिश रूपमा
प्रधानमन्त्री होटल3* (Nha Trang / भियतनाम) फोटो र समीक्षा